Dufcadii 5aad Oo Ka Qalin-Jabisay Kuliyada Caafimaadka Goday. - Cakaara News
Dufcadii 5aad Oo Ka Qalin-Jabisay Kuliyada Caafimaadka Goday.
Goday(cakaaranews) Axad, 5ta, may, 2016, Xaflad si meeqaam sare loo soo agaasimay oo ay ku qalin-jabiyeen dufcadii 5aad ee kuliyada caafimaadka magaalada goday arday dhan 251 ayaa maanta ka dhacday maamulka magaalada goday.
Waxaana ka soo qaybgalay xafladan qalin-jabinta masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka xafiiska tababarata xirfadaha iyo farsamada DDSI mudane Naasir Xasan, wasiirka waraabka iyo horumarinta Dooxooyinka DDSI mudane Suldaan Maxamed, maareeyaha kuliyada caafimaadka goday mudane Amiin maxamed xaaji, gudoomiyaha gobolka shabeele mudane Farxaan Cabdi Maajuun iyo marti sharaf kale.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay wasiirka xafiiska tababarada, xirfadaha iyo farsamad TVETKA DDSI mudane Naasir xasan kaasi oo ugu horaynitii ugu hanbalyeeyay ardaydan maanta ka qalinjabinaysa waxbarashadii ay mudada soo baranayeen gaar ahaan cilmiga caafimaadka wuxuuna ka warbixiyay muhiimada ay leedahay waxbarashadu gaar ahaan cilmiga caafimaadka. Wuxuuna ku booriyay wasiirku in ay Bulshada uga hagar baxaan Siinta Adeeg Caafimaad oo Hufan.
Masuuliyiintii kale ee ka hadashay xafladaasi oo ay ka mid ahaayeen maareeyaha kuliyada mudane aamiin maxamed xaaji, wasiirka waraabka iyo horumarinta dooxooyinka DDSI mudane suldaan maxamed iyo gudoomiyaha gobolka shabeele mudane farxaan cabdi maajuun ayaa dhamaantood ka warbixiyay muhiimada ay leedahay waxbarashadu kuwaasi oo ku booriyay in ay ardaytan maanta qalin jabisay ay si hagar la aan ah uga qayb-qaataan hirgalinta qorshayaasha horumarineed.